Ingabe ukusebenzisa imizuzu eyi-10 kuyasebenza? - Ukuzivocavoca Umzimba
Main > Ukuzivocavoca Umzimba > Ukuzivocavoca okufushane - izixazululo ezisebenzekayo
Ukuzivocavoca okufushane - izixazululo ezisebenzekayo
Ingabe ukusebenzisa imizuzu eyi-10 kuyasebenza?
Ngokuzivocavoca kweImizuzu eyi-10ngamandla nangokuzikhandla, uzoba sethubeni lokunikeza umzimba wakho lokho okudingayo ukuze uqhubeke nokuzivumelanisa nezimo, wakhe imisipha, futhi wandise amandla akho. Ishumiimizuzuusuku lwanele ukukunikeza okuhleZivocavoce.Ephreli 4 2021
Hheyi bafana, nguRobin waseBalancelife futhi bengifuna ukuphendula umbuzo osheshayo engiqhubeka ngiwuthola. Uma ungazi, uyazi ukuthi ngiyazithanda izinselelo ezisebenzayo futhi ngakha nezinhlelo ezibandakanya ukusebenza okufushane kwansuku zonke kwama-Pilates, ngakho-ke ngibe nenselelo ebizwa nge-28 Days Pilates eminyakeni embalwa edlule futhi ngibe nezinselelo ezimbalwa kusukela lapho bonke abagxila kuzo ukwenza nje imizuzu eyi-10 yama-Pilates ngosuku futhi omunye wemibuzo engiwuthola kakhulu ukuthi ukusebenzisa imizuzu eyi-10 kuyasebenza ngempela futhi ngiwuthola ngokuphelele, ngumbuzo omuhle ngoba uma ubungangibuza eminyakeni embalwa eyedlule, ngabe Ngiyangabaza futhi, kuzwakala kukuhle ukuba kungathembeki koyedwa futhi kumane nje kuphambane nakho konke engikwaziyo ngokushisa ama-calories futhi uyazi ukuthi ufunda zonke izinto ezithi uma udla ibha yeSnickers kufanele uvivinye umzimba amahora amathathu noma yini ukushisa lawo makhalori ngakho-ke ngabe bengingabaza. Ngiyazi ukuthi kade ngenza lezi zinhlelo cishe iminyaka eyisihlanu futhi ngibonile imiphumela emangazayo evela kubantu emhlabeni wonke, ngakho-ke ngamafuphi, impendulo inguyebo wemizuzu eyi-10, ukusebenza kwemizuzu eyi-10, kepha ngifuna ukudlula izizathu zokuthi kungani besebenzela labo abasenokungabaza okuncane, ngakho-ke nginawo amanothi ami futhi ngizovele ngidlule kuwo futhi ngithemba ukukuqinisekisa ukuthi kunendlela esebenza kahle futhi ethokozisayo yokwengeza ukuzivocavoca empilweni yakho yansuku zonke hlanganisa.
Isizathu sokuqala ukuthi uma udinga ukuzivocavoca imizuzu eyi-10 ngosuku futhi uyazi ukuthi kufanele, yimizuzu eyi-10 kuphela, kuthatha isithiyo sengqondo uma wazi ukuthi lokhu kuzivocavoca kuza futhi wazi njengoba kunjalo, uyazi wena kufanele wenze lokhu kuzivocavoca umzimba ukuze ucabange ngakho usuku lonke futhi uma umatasa noma uma izinto zishintsha izinhlelo noma wazi ukuthi unezingane ezinjengami futhi enye yazo ivuka sekwephuzile Uma kufanele ulale noma udle endaweni engafanele isikhathi, lapho-ke sonakele ngoba ihora lakho ozibekele lona selibekiwe. Usethubeni lokuyeka uma kuyimizuzu eyishumi kuphela ukuthi ube nalo anginandaba nokuthi umatasa kangakanani anginandaba nokuthi kwenzekani Baby ulala sekwephuzile, umuntu udinga ushintsho lwenabukeni, ubuya emsebenzini sekwephuze kakhulu, noma ngabe yini, ungathola imizuzu eyi-10 njalo ulahlekelwe ukukhiywa kwengqondo B, uma kungukuzivocavoca okufushane, ngakho-ke masithembeke kwesinye isikhathi, thina nje don ngizizwa sengathi ngifuna ukwenza umsebenzi omude futhi wonke umuntu angathi kulungile, ngingenza imizuzu eyi-10 kuphela imizuzu eyishumi, leso yisona sizathu esiyinhloko sokusebenza kwemizuzu eyi-10 bese lokho kungiholela ephuzwini lami elilandelayo, okokuqala ukuthi kukudlulisa umgoqo wengqondo futhi okwesibili, kukufaka kumata wakho nalokho engikuthole kuningi labantu zama leli qhinga ukuthi Uma wenze imizuzu eyi-10 futhi uzizwa kahle, usuvele uphansi, usuvele usematheni wakho ukuze uzithole oh ngingakwenza lokho, ngingenza eminye imizuzu eyi-10 bese ngithi uyakwenza enye indatshana emfushane ye-YouTube noma eminye imizuzu eyi-10 yokuzivocavoca oyikhonzile futhi ngaphambi kokuthi wazi, wenze imizuzu engama-20 futhi mhlawumbe nemizuzu engama-30 futhi imfihlo yakho konke, ukunqoba isithiyo sengqondo, ukumane ungene ohlakeni lwakho n futhi Qalisa futhi lapho uqaphela ukuthi kumnandi kanjani ngoba ukuzivocavoca umzimba kuhlala kukuhle njalo kuyakhuthaza ukuqhubeka.Iphuzu lesibili ukuthi izinto ezincane zivame ukuholela ekulungeni okungaphezulu ngoba ingxenye enzima kunazo zonke ivame ukuqala ngolwazi oludinga kuphela vivinya imizuzu engu-10, kodwa uma usuqala uqala ukuba umlutha walowo muzwa futhi kuzoba njalo.
Iphuzu lesithathu ligqugquzela ngokwengeziwe ukuthi ucwaningo olwengeziwe lubonisa ukuthi ukusebenzisa okufushane kusebenza ngendlela efanayo nokuthi akusebenzi yini Kuphumelela kakhulu kunokusebenza okude futhi kunezizathu ezimbalwa zokuthi kungani uma kukhulunywa ngokusebenza kwe-cardio kufana noma kungcono kune ukusebenzisa isikhathi eside futhi okufanayo kuya kuma-Pilates, kepha nginendlela eyingqayizivele yokukwenza ugxile kakhulu kwifomu lakho ngokuhlala okufushane ukuhlala futhi ukwazi ukwenza leyo mizuzu eyi-10 kahle kunokuzama ukwenza ihora futhi ukhathale futhi ube nesithukuthezi futhi ukuphazanyiswa nokuthola ubudlabha ukuze ugcine uchitha isikhathi, ngizothi ku-A 60 min pilates Workout kubi, uma ungakwenza, ungaya ekilasini uthole ukuzivocavoca okuhle kukho, lokhu kuhle kodwa iqiniso ukuthi iningi lethu siligijimisa lokhu lisuka ekhaya ngakho-ke imizuzu eyi-10 ukugxila efomini lakho inikele ngakho konke ngaphambi kokukhathala nobudlabha futhi kuliqiniso elithakazelisayo ukuthi lokhu kuzivocavoca okufushane kusiza ekujwayeleni ukudla okufisa ukusebenza kwe-cardio okungenza ngikwazi ajuluke aqede ngibe ngilamba ngempela futhi ngicabanga ukuthi ngifanelwe noma yini isidlo esikhulu noma i-dessert noma yini kodwa lokho Iqiniso ukuthi ngibulawa indlala ngokuhlikihla imetabolism yami, uma wenza nje umzila omfushane we-Pilates wemizuzu eyi-10 kusiza ukujwayela isifiso sakho sokudla , Ukushaywa unhlangothi kwenhliziyo yami kuyanda futhi ngiphefumula ukuma okuhle ngizizwa nginamandla ngiyazi ngemisipha yami kodwa ngeke ikuyise ekhishini kunalokho kuzokuyisa endaweni lapho ngifuna ukuhlonipha lo msebenzi ebengingawuthandi nje. ukuthi ngizizwa ngimuhle ngale ndlela futhi ngiyazi ukuthi ngisebenza nje leyo misipha, ngiyayizwa ku-abs wami ngakho-ke angilingwa kakhulu ukuba ngiye ekhishini ngihlale nje lapho ngidle futhi ngenze umsebenzi onzima Lokho Ngisanda kwenza ngoba uzizwa kahle futhi uvumelana nomzimba wakho futhi ngiyazi ngomzimba wakho, ngakho-ke lapho usuka ebhuthini, lezi yizizathu ezine engicabanga ukuthi ukusebenza okuncane kuyasebenza, futhi empeleni ngiyazi, ngqo kululwane engilucabangayo kwakuyibo. Ngibabonile laba bantu ngokoqobo namakhulu abesifazane yizinsuku ezimbili ngesonto futhi zonke ezinye izinsuku ukusebenzisa okufushane futhi niyazi ukuthi kungani inhloso yami kuThe Sisterhood nazo zonke izinhlelo zami ukukusiza ukuthi uhlale ungaguquguquki ngoba Umzabalazo omkhulu kunayo yonke ukuhlala njalo Sikhuthazeka Sijabule Sizama okuthile okusha ohlelweni olusha kepha emasontweni ambalwa sizobhoreka noma simatasa kakhulu futhi kunzima ukuhamba nalezi zibopho ezinkulu ngakho konke lokho ukusho ukuthi i-10 ukusebenza umzuzu omncane, ngoba uyakwazi ukuhlala ungaguquguquki, unganqoba isithiyo sengqondo futhi ufike kumata wakho, ungakwazi ukuzivumelanisa noma ngabe umatasa kangakanani futhi ungasebenzisa futhi ujabulele izinzuzo zokuzivocavoca umuzwa wokuthi kuxhumene nomzimba wakho kuvuselelwe ukuze ukwazi ukwenza izinqumo eziningi, futhi konke lokhu kukwenza uhambisane kakhudlwana, ngakho-ke kungcono ukungaguquguquki ekuhambeni kwesikhathi kunokuchitha inyanga wenza kahle kakhulu ngokuzivocavoca umzimba kwakho bese uthatha ikhefu lezinyanga ezine izinyanga eziyisithupha zokuphumula noma ngabe kuyini bese uqala phansi bese uzama kanzima bese uthatha ezinye izinyanga ezintathu ukuthi nonke niyazi lo mjikelezo ngiyethemba angisiye kuphela owazi lo mjikelezo ngakho imizuzu eyishumi yomsebenzi wokuqeqesha ngithe imizuzu eyishumi yokuzivocavoca kanye neyodwa yezizathu eziyinhloko zalokho kungenxa yokuthi kukusiza ukuthi uhlale ungaguquguquki, ngakho-ke uma unolwazi ngokuzivocavoca imizuzu eyishumi. Ngingathanda ukuvula futhi ngihlanganyele nami. Bengifuna nokuthi ungilandele ezinkundleni zokuxhumana bese ubhalisela i-newsletter yami ngoba ngizokhipha okuthile okuthokozisayo kakhulu ngalo Lwesihlanu okuzokwakhela phezu kwalokho.
Inhloso yami ukukusiza ukuthi uyenze isebenze futhi ubone ukuthi ikusebenzela kanjani ngakho-ke shiya amazwana bese ubhalisela incwadi yami yezindaba bese sizokubona ubuya lapha maduze
Ingabe ukusebenza kweminithi eli-7 kuyasebenza ngempela?
I-HICT imvamisa iphephile, iyasebenza, futhi isebenza kahle kakhulu, inikela ngezindlela ezingokoqobo zokuvivinya umzimba kubantu abazi isikhathi. Futhi, ngoba isisindo somzimba sisetshenziselwa ukumelana, abantu ngabanye bangakwaziyenzaleziukuzivocavoca umzimbanganoma yisiphi isikhathi, kunoma iyiphi indawo, ngaphandle kokudinga ukufinyelela ezintweni ezikhethekile noma ezibizayo nezinsiza.Juni 6. 2013 g.
(I-alamu iyaqhuma) - Kwenzenjani bafo? NguChris Heria, wamukelekile kwenye i-vlog. Siqala nje ukuqala ekuseni. Njengawo wonke umuntu, ngokushesha nje lapho uvuka, wenza i-cardio encane, uhlobo oluthile lwenjwayelo yasekuseni, mhlawumbe ugijimisa umshini wokunyathelisa.
Sizoqala usuku lwethu ngenqubo yasekuseni ongayenza nsuku zonke eyenzelwe ngqo ukushisa amafutha nokwakha imisipha. Futhi yonke le mithambo yokuzivocavoca okwenziwayo ingcindezi ephansi, okusho ukuthi ungavuka uphinde uvuke futhi ungangena kalula kuzo ngokushesha. Futhi okuhamba phambili ukuthi lokhu kuvivinya kuyasebenza kakhulu, kepha izivivinyo eziyisisekelo noma yimuphi umuntu noma i-novice engaqala khona manjalo.
Awudingi isipiliyoni sangaphambilini sokuqina ukuze wenze lezi zivivinyo. Okusho ukuthi ungaqala ukwenza inqubo yasekuseni nami njengamanje. Futhi kuleso simiso sisebenza yonke imisipha ehlukene emzimbeni wethu, kepha ngeke sisebenzise i-overexert noma yimuphi umsipha othize, ngakho-ke kuhle ukwenza le nqubo nsuku zonke. uzobe ushukumisa imisipha yakho kaningi kaningi kunokushaya iqembu elilodwa kuphela lemisipha ngosuku.
Cishe uzobona leli qembu lemisipha kanye ngesonto. Futhi lokho kuzoqinisekisa ukuthi uhlala usebenza futhi uthuthukisa imisipha yakho isonto lonke. Futhi enye yezinto ezinhle kakhulu ngayo, into yokuqala ekuseni, ukuthi uzoqhubeka nokwakha umphumela wokusha ngemuva kokuqeda ukuzivocavoca umzimba, okuzohlala usuku lonke, kuze kufike emahoreni angama-24 qhubeka uvutha amanoni isikhathi eside.
Ngakho ngifuna nenze le nqubo njalo ekuseni. Ngeke kube nzima kangako futhi ngiyathembisa ukuthi uzohlala ushisa amanoni, wakhe imisipha, futhi ungene esimweni esihle kakhulu sempilo yakho. Ake sihle siqale asiqhubeke siqale.
Vula uhlelo lokusebenza lwe-HeriaPro lwenqubo yanamuhla ekuseni futhi ake siqale lo msebenzi ngokushesha. Kokuzivocavoca ngakunye sizokwenza imizuzwana engama-45 bese sithatha ikhefu lesibili eli-15 phakathi kwenyanga ngayinye lokhu kwaziwa njengokuqeqeshwa kwesikhawu esiphakeme, futhi lokhu kuzokunikeza umphumela we-burpe ozokugcina uvutha amafutha kuze kube ngamahora angama-24 ngemuva kokuqeda le nqubo yokuzivocavoca. Ngakho-ke ukuzivocavoca kokuqala uhhafu wama-burpees, wazi ukuthi ungawenza kanjani lo msebenzi, qhubeka, uchofoze ukunyakaza, ubuke i-athikili. (umculo othule we-elekthronikhi) Kulungile, ake siqale, imizuzwana engama-45.
Senza i-push-up, ngaphandle kwezinyawo zethu. (umculo othambile we-elekthronikhi) music Umculo kaHeria ♪ (uphefumula ngokucijile) Kulungile, ngakho-ke lapha siqala ukuzivocavoca umzimba. Lokhu kumayelana nokungena endaweni yokuphusha nokuma ngezinyawo zakho.
Akudingeki ukuthi uqhume njengoba kufanele ngikwenze ngejubane lakho futhi ekugcineni uzoba ngcono. Umsebenzi olandelayo uqukethe ukushintshanisa izinzwane zakho emapulangweni. Ake siqale. (umculo othule we-elekthronikhi) Bamba umongo wakho uqiniseke ukuthi ulawula ukuphefumula kwakho.
Uma uphefumula ngokushesha okukhulu, uzozikhipha. Gcina imilenze yakho iqonde, ngizohamba nna ngikuthinte ngohlangothi olulodwa ngaphandle, ngena, uthephe olunye uhlangothi. Qiniseka ukuthi wenza izinkontileka zamahlombe akho bese ucindezela umnyombo wakho.
Cindezela wonke umzimba wakho. (uphefumulela phezulu) Kulungile, ngakho-ke ukuzivocavoca kuhle njengokuphumula okusebenzayo, okungukuthi, uma nje usuqedile ukuzivocavoca okunzima kakhulu njengehhafu burpees, ufuna ukugcina ubambe ukushaya kwenhliziyo yakho, ukujuluka, ukushisa amafutha, nokuvuselela nokukhulisa imisipha yakho. ukuvumela. Ngakho-ke ake siqhubekele ekuvivinyweni okulandelayo kokubamba ipulangwe eseceleni. (I-Smooth Electronic Music) Kulokhu kuvivinya umzimba, kubaluleke kakhulu ukuthi wenze i-abs yakho, ikakhulukazi izibophezelo zakho, futhi ususe nehlombe lakho futhi, uzama ukuphakamisa umzimba wakho futhi uhlanganyele nomgogodla wakho ngangokunokwenzeka.
Ngakho-ke cindezela, cindezela bese uphefumula ngaso sonke isikhathi. Kulungile, sizoqhubeka futhi sishintshe. Music Heria umculo it (uphefumula kahle) Kuhle.
Ake siqhubeke. Sizoqhubeka nomsebenzi olandelayo, lelo kuzoba ipulangwe eliphansi liye kupulangwe eliphakeme eliqhubeka nokusebenza umnyombo wethu. Kepha futhi ukuvuselela umzimba wethu wonke nokuvuselela izingalo zethu.
Ake siqale lo msebenzi ngokushesha. Imizuzwana engama-45. (Umculo othule we-elekthronikhi) Kubalulekile njengoba wenza lo msebenzi ukuze uthole ukungezwani nefomu nobuchule kumongo wakho Awufuni ukuzulazula kanjena lapho wenza lokhu.
Zama ukugcina ifomu lakho liqinile ngangokunokwenzeka. Lapho cishe usuphakathi nendawo, uzofuna ukushintsha ukuthi yisiphi isandla ozoqala ngaso. Ngakho-ke yenza Okay okumbalwa, asithuthukise. Music Umculo kaHeria ♪ Kulungile. (Uphefumulela phezulu) Ukuzivocavoca okulandelayo esinakho ukukhahlela nge-butt.
Lesi isinyathelo esihle sokubuyisa amandla manje. Futhi sizothatha ikhefu ezandleni zethu okusho ukuthi sizoba namandla amaningi emilenzeni yethu, sizokwazi ukuqhubeka nokusebenza kanzima futhi sithuthuke eduze. Kulungile, ake sikhahlele lezo zinqa khona manjalo. (umculo othambile we-elekthronikhi) music Umculo kaHeria ♪ Khumbula ukulawula ukuphefumula kwakho.
Adonse kancane, awukhiphe kancane. Iqiniso ukuthi ukuphefumula kuyikho konke. Uma ungafunda ukulawula ukuphefumula kwakho nokuphefumula kahle ngenkathi uzivocavoca umzimba, uzokwandisa ukubekezela kwakho cishe sekuqedile ngale nqubo.
Sizongena kompompi bamadolo. Imizuzwana engama-45 ngokuqhubekayo. Ngakho-ke sikhahlele ngemuva, manje sizophakamisa ngaphambili siphakamise amaketanga emisipha angaphambili nangemuva.
Ake sigxumele ngqo kulabompompi bamadolo aphakeme. (umculo othambile we-elekthronikhi) music Umculo kaHeria ♪ phakamisa amadolo akho phezulu ngangokunokwenzeka. Uma uyithatha ephakeme, lapho uzibandakanya kakhulu, kulapho wenza kangcono lokhu kuhamba.
Eminye imizuzwana emihlanu. (uphefumulela phezulu) Kulungile, thina 'Njengoba ubona, ngijulukile. Lona kuphela umzuliswano wokuqala.
Futhi uma sekushiwo lokho, qhubeka phambili, susa ompompi bamadolo aphakeme ohlwini, sizozivocavoca okokugcina. Lokho kuzoba ngama-squash, amasekhondi angu-45. Nazo-ke. (ukhipha ngokucijile) (umculo othambile we-elekthronikhi) music Umculo kaHeria ♪ Qhubeka, konke onakho.
Qiniseka ukuthi umnyombo wakho ukugcine njengokuqhuma ngangokunokwenzeka Qedela ithanga lokuqala, ake siqhubeke futhi sihlole ama-squats kusuka ekuqeqeshweni, kulapho uzoba khona nenqubo ephelele yasekuseni yawo wonke amazinga wokuqina. Qalisa khona manjalo, futhi khumbula, ukwenza ithanga elilodwa layo kusebenza kangcono kunemizuzu engama-30 usebenza kumshini wokunyathelisa, futhi kuzuzisa kakhulu ngoba futhi uvivinya izingalo neminye imisipha emzimbeni wakho, hhayi nje i-cardio Lokhu Uhlelo luphelele okokuqala ngqa ekuseni. Kuthatha imizuzu eyisikhombisa kuphela ukuqedela lonke uhlelo.
Ngokuzivocavoca okuyisikhombisa kuphela, kuvulwe imizuzwana engama-45, kususwe imizuzwana engu-15, futhi konke lokhu kuvivinya umzimba kuyisisekelo, izivivinyo ezinomthelela ophansi ozenzayo nje Awudingi noma yiluphi ulwazi lomzimba lwangaphambilini noma isipiliyoni futhi usazothola ukuzivocavoca okumangalisayo. Futhi uzosusa amanoni kuwe njalo ekuseni futhi wakhe izicubu njalo. Futhi ekugcineni, uzothola okungcono kakhulu kunalokho.
Le nqubo iba lula kakhulu, uzokwazi ukwenza imizuliswano emibili bese kuthi ekugcineni ugcine imizuliswano emithathu, futhi lokho kufanele kuthathe kuphela imizuzu engama-25 kuye kwengama-30 ukuze kutholakale ukuqeqeshwa okuhle kakhulu. Futhi uma ungenayo imizuzu engama-30 ekuseni, vele uvuke imizuzu engama-30 ngaphambi kwalokho. Iqiniso ukuthi asinaso isikhathi ngaso sonke isikhathi, kufanele uthathe isikhathi uma ufuna ngempela ukufeza izinhloso zakho.
Siyabonga ngokujoyina, usukulungele ukuqala usuku, futhi ngizokubona futhi kusasa ekuseni ukubuyela kule nqubo, futhi khumbula, uma uzama ukubona imiphumela yangempela, kufanele uqeqeshe ngokuhlakanipha nokuthi Udinga ukuba nohlelo lokuzivocavoca oluhleleke kahle ukuze uqinisekise ukuthi ungena esimweni esihle kakhulu sempilo yakho kahle ngangokunokwenzeka. Uma ufuna izinhlelo zami zokuqeqesha nezokuqeqesha engizithumela nsuku zonke nangesonto ngalinye, ngakho-ke ngandlela-thile landa uHlelo lwe-HeriaPro lwezinhlelo zokusebenza kuselula yakho njengoba ngizithumela ngesikhathi sangempela. Kufana nokuba nami ephaketheni lakho njengomqeqeshi womuntu siqu.
Awutholi kuphela ukufinyelela kukho konke ukuzilolonga kwami ​​kanye nemikhuba yami, kepha futhi nakho konke ukusebenza engikwenzele abanye esikhathini esedlule, kanye nejenaretha yokuzivocavoca eyenziwe yimina edala izinhlelo zokuqeqesha ezenzelwe wena kanye nezinga lakho lokuqina, ngokucabangela imigomo yakho yokufaneleka. Vele uxhume ukuthi yiliphi iqembu lemisipha ofuna ukulilolonga, ukuthi kufanele usebenzise isikhathi esingakanani, ukuthi iliphi izinga lakho lokuqina, hlobo luni lwemishini ofuna ukusebenzisana nayo, nokuthi ufuna ukufudumala noma cha futhi uzoba ngokushesha inqubo oyakhile, isitayela sikaChris Heria. Ngakho-ke ngizonibona bafana kuhlelo lokusebenza lweHeriaPro.
Ngiyabonga ngokubuka le ndatshana. Futhi uma uthande le ndatshana ngakho-ke nakanjani shaya inkinobho yokuthanda. Phawula ngezansi, ungazise ukuthi udaba olulandelayo lumayelana nani ngoba ngifunde yonke imibono.
Futhi ngokuqinisekile yabelana ngale ndatshana nomngani, uzama ukwakha imisipha futhi ashise amanoni futhi aqinise inqubo yakhe yasekuseni. Futhi kokuqukethwe kwami ​​okuningi phakathi nesonto, qiniseka ukuthi uyangilandela ku-Instagram. Cishe ngakho konke okuthunyelwe okukodwa, ngihlala nginikeza uhlobo oluthile lokupha.
Futhi uma ufuna ithuba lokuba yingxenye yalo, ngilandele kuLokhu nguChris Heria ozwakala kulesi siteshi, kanye nezinye izingoma ongakazizwa okwamanje. Okokugcina, mina nabasebenzi bakwaThenx sizoba seRoma, eBerlin naseBarcelona ekupheleni kuka-Agasti bese sithumela imicimbi yethu yokuzivocavoca futhi sifuna ukuba lapho, bese sibhalisa manje ku-texxblog/events.
Imicimbi iyeza maduze futhi izindawo zibhukhishwe ngokukhulu ukushesha. Gcina indawo yakho manje. Isixhumanisi sisezansi kwencazelo.
Sizokubona ekupheleni kuka-Agasti. Nabo bonke abanye abantu, sizobonana ngoLwesine oluzayo noma ngeSonto elizayo esiteshini iThenx. Uthando oluhlanyayo, ukuthula ukuthula baby
Ingabe ukusebenzisa okufushane kwenza noma yini?
Ucwaningo oluvela eNyuvesi yase-Utah lukhombisa ukuthi zonke lezo zingcezu nezicucu ze-ukuzivocavoca umzimbawenayenzausuku lonke lungangeza entweni enkulu. Olunye ucwaningo olushicilelwe ku-Obesity luveze lokho ukwehlukanaukuzivocavoca umzimbaphezulu kumfushaneama-chunks enza umqondo othile uma kukhulunywa ngokulawulwa kwesifiso sokudla.Februwari 27 2017
Kokuhle noma okubi, i-Intanethi ihlanganisa abantu abavela ezindaweni ezikude zomhlaba futhi inikeze imininingwane ngazo zonke izihloko ongazicabanga. Futhi nakanjani i-porn. Kukhona impikiswano mayelana nokuthi i-intanethi ingakanani okuqukethwe kocansi.
Kepha uma uyifuna, uyokuthola. Kubuthinta kanjani ubuchopho babantu, izimo zengqondo nokuziphatha kwabo? Impendulo emfushane ithi: Iyinkimbinkimbi futhi asazi okuningi. Kepha sihlolisise ezinye izingozi - futhi yebo, ngisho nezinzuzo ezingaba khona - zokubuka izithombe zocansi.
Uyazi, ezinye zalezi zifundo zikhuluma ngokuziphatha okuphazamisayo njengodlame lwezocansi nokudlwengulwa. Uma kwenzeka ufuna ukugwema lezi zinto. Iningi locwaningo lwezithombe zobulili ezingcolile luyi-correlative - awekho amavolontiya abelwa ngezikhathi ezithile ukubuka uchungechunge lwezihloko ezicacile ukubona ukuthi kwenzekani ebuchosheni babo.
Esikhundleni salokho, izifundo eziningi zibandakanya ucwaningo olubuza abantu ngokuziphatha kwabo nangezici zabo, ngaphezu kokuthi babuka izithombe ezingcolile ezingakanani, wonke umuntu obambe iqhaza kumele avume ukubamba iqhaza ocwaningweni lwezithombe zocansi, okungasho ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi bona bazikhethela bona. Konke lokho ukusho, asikwazi ukuqiniseka ukuthi le miphumela isebenza kubo bonke noma ngisho nakubantu abaningi, kepha iyisiqalo. Olunye ucwaningo luthole ukuthi ukubukela izithombe zobulili ezingcolile eziningi kungakhombisa umehluko ebuchosheni babantu, ikakhulukazi engxenyeni ebizwa nge-striatum.
I-striatum ibandakanyekile ekusetshenzisweni kwemivuzo futhi isebenza njalo ngesikhathi sokuvusa ucansi - phakathi kwezinye izinto kwezinye izifunda ukuqeqeshwa kwengxenye enkulu yobuchopho bakho. Izifundo ezimbili ze-MRI zivivinye ababambiqhaza besilisa abangama-70 ngokubakhombisa izithombe ezinhle. Futhi amadoda athola izithombe zawo zobulili ezingcolile asebenzisa umlutha noma inkinga abe nomsebenzi omningi we-ventral striatum kunalabo abangazange.
Olunye ucwaningo luthole ukuthi inani le-porn libukwe kabi ngosayizi wengxenye ye-striatum, i-tailbone yangakwesokudla, kanye nokuxhumana phakathi kwe-striatum nezinye izingxenye zobuchopho, abacwaningi kulolu cwaningo lwakamuva bathi kungenzeka ukuthi abantu ababuka izithombe zobulili ezingcolile eziningi bazokhuthaza kakhulu lolu hlelo lokuvuza futhi empeleni baphinde basebenzise ubuchopho babo ukuze badinge ukukhuthazwa okwengeziwe. Kepha bayabona futhi ukuthi lokhu kwehluka kobuchopho kungahle kungabangelwa ngamagama we-porn, abantu abane-striatum encane bangadinga ukukhuthazeka okwengeziwe ukuze bathole injabulo futhi bafune izithombe ezingcolile ezingaphezulu. Ngalolu hlobo locwaningo lokuhlanganisa, awukwazi ukusho ngempela ukuthi yikuphi kulokho okubili.
Omunye umbuzo ovela kaningi ukuthi ukubukela izithombe zobulili ezingcolile kungaba yi-cathartic - empeleni, kuyindlela yokuphepha yemizwa ethile. Isibonelo, izazi zokusebenza kwengqondo zizamile ukutadisha ukuthi zibuthinta kanjani ubudlova. Uma ubheka iphethini ejwayelekile e-US, ukufinyelela ezithombeni zobulili ezingcolile sekulula eminyakeni yamuva.
Emashumini eminyaka, amazinga obugebengu obunodlame njengokudlwengulwa anciphile. Futhi kunephethini efanayo lapho ubheka lapho izithombe zobulili ezingcolile zisabalele nakwamanye amazwe futhi, okuwukuhlobana nje futhi hhayi zonke izifundo ezibonisa lokhu kuxhumana. Isibonelo, ukuhlaziywa kwe-meta ka-2016 ku-Journal of Communication kuhlolisise izifundo ezihlukene ze-22 zibuza abantu mayelana nesipiliyoni sabo sokubuka izithombe zobulili ezingcolile kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi okubikiwe - izinto ezifana nokusetshenziswa kobudlova, ukuhlukunyezwa ngamazwi, noma ezinye izindlela ezisongelayo.
Futhi bathole ukuthi i-porn eningi yayihlobene namazinga aphezulu okuhlukumeza ngokocansi nangokomzimba, ikakhulukazi lapho i-porn yayinokuqukethwe okunodlame. Lokhu kuphakamisa ukuthi ukumodeliswa kokuziphatha kungahle kube semsebenzini: ukuthi abantu ababona isimilo kwabanye - ngisho nasesikrinini - kungenzeka ukuthi bazenzele bona. Ngakho-ke izazi zokusebenza kwengqondo zizamile ukuqonda le datha ephikisanayo.
Ucwaningo lwe-2012 olushicilelwe ku I-Journal of Criminal Justice lungasiza ekukhanyeni: ubudlelwano phakathi kocansi nobudlova bungahle buphathe isikhathi. Abaphenyi babuze amadoda amadala angaphezu kwama-600 alahlwe ngamacala obugebengu ngocansi ngomlando wabo wokubuka izithombe zocansi. Bathola ukuthi ukubuka izithombe ezingcolile zobulili ngesikhathi sokuthomba kwakuxhunyaniswe namacala abucayi kakhulu enziwa njengabantu abadala, kufaka phakathi ukuthotshiswa kakhulu kwezisulu zabo, ngakho-ke ukuvezwa kusenesikhathi ekuziphatheni okubi ngokocansi kungenzeka kudlale indima.
Futhi uma ababoshiwe bebika ukuthi babuka izithombe zobulili ezingcolile ngaphambi nje kobugebengu babo, ubugebengu babo babungebuhle kangako, ngakho-ke kungenzeka ukuthi kwakungu-catharsis. Kepha kunezinto eziningi eziholela ebulelesi obunodlame. Ngakho-ke ngaphandle kobufakazi obuyimbangela, asazi ukuthi izithombe zobulili ezingcolile zixhumene ngqo noma kanjani.Izifundo ezinjengalezi zincane kakhulu ngoba abantu abaningi abenzi ubugebengu obunodlame.
Into efana nobulili kulula ukuyikala ngoba wonke umuntu angatshela isimo sakhe sengqondo ngabesilisa nabesifazane. Futhi lokho ngaso sonke isikhathi. Yi-inthanethi.
Ngokwezifundo ezimbili ezishicilelwe ku I-Journal of Ucwaningo Lwezocansi ngo-2015 no-2017 ezihlolisise imikhuba yamashumi ezinkulungwane zabantu baseMelika, ukusetshenziswa kocansi kuxhunyaniswe nemibono elinganayo - izinto ezifana nesifiso sabesifazane emsebenzini nasezikhundleni kodwa Indaba yehlukile uma kukhulunywa ngezinganekwane zokudlwengula, njengomqondo wokuthi okugqokwa umuntu kungavuna udlame olubhekiswe kubo. Ucwaningo lwamakhulu abafundi basekolishi luye lwathola ukuthi abesilisa nabesifazane ababuka izithombe zobulili ezingcolile - ikakhulukazi izithombe zobulili ezingcolile ezinodlame - maningi amathuba okuthi bakholelwe izinganekwane zokudlwengula. Ekugcineni, uma kukhulunywa ngenhlalakahle yakho ejwayelekile, ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi ngabe i-porn yinhle noma imbi ngawe incike ekutheni ucabanga ukuthi iyini.
Ucwaningo lwabantu abangaphezu kwe-2,000 luthole ukuthi ukubukela i-porn kuhlotshaniswa nokwanda kwezimpawu zokuzibika ezibikiwe. Kodwa-ke, lo mphumela ubonwe kakhulu kwabangu-10% ababukile yize bekungavunyelwa. Abaphenyi babecabanga ukuthi laba bantu babekhathazwa yilesi simo Ukungavumelani phakathi kwemigomo yabo yokuziphatha nezenzo zabo.
uhlelo lokusebenza lokuhamba ngebhayisikili le-fitbit
Kulabo ababengenabutha ngokokuziphatha, abantu ababuka izithombe zocansi izikhathi eziningana ngesonto noma ngaphezulu babika ezinye izimpawu zokudangala. Futhi abacwaningi bacabanga ukuthi okuphambene nalokho kungenzeka lapha: laba bantu bangacindezelwa futhi basebenzise i-porn ukubhekana nakho. Ngakho-ke kubonakala kunengozi yokubuka izithombe eziningi ezingcolile, kepha kungenzeka kungabi kubi konke.
Ngaphezu kwanoma yini, sidinga ucwaningo olwengeziwe ukuze sazi ukuthi kanjani futhi kanjani? okuningi kuthinta thina.Ngenxa yengqondo nokusebenza kwengqondo yomuntu nokuziphatha kwethu? Kuyinkimbinkimbi. Noma uma nje ufuna ukusisekela ngokubuka umbukiso omuhle ngokulinganayo, ungabhalisela ku-youtube.com/scishowpsych.
Ingabe imizuzu engama-30 imfushane kakhulu ukuzivocavoca?
'Imizuzu engama-30umthetho wosuku uvela ezinkombandlela zamanje zokuzivocavoca zikahulumeni wase-U.S., ezincoma ukuthi abantu bahlanganyele ku-150imizuzuwokusebenza okulingene ngamandla we-aerobic ngesonto. (Lokhu kusebenza cisheImizuzu engama-30usuku, izinsuku ezinhlanu ngesonto.) Kepha igama elingukhiye lapha ukuzivocavoca 'ngokulingene'.Kwangathi 24, 2016
'Cisha amalambu' bese uvule umculo ngenkathi udla. 'Lezi zithikamezo zemvelo zisusa ukunaka kwakho ekudleni.' Ngenkathi udla, phendula indlu yakho ibe yi-rave, zivumele uxoshwe ibhere elikhulu ukuze ungabi nesikhathi esanele sokufaka ukudla emlonyeni wakho.
Luhlobo luni lweseluleko leso? Kulabo kini abahlose ukuthola isisindo esinempilo, azikho izeluleko ezishodayo zokwehlisa isisindo kwi-intanethi - ngizothatha esinye saleso seluleko ngisivivinye nge-polygraph. Futhi thola ukuthi yini eyiqiniso, yini engekho nokuthi yini ngandlela thile kulowo mhlaba ophakathi. Ake sithi ukubonga okukhulu kuNoom ngokuxhasa le ndatshana.
Phuza ikhofi elimnyama. 'Lokho kuzokwenza ukuthi umzimba wakho uhambe kahle.' Uyabona, i-caffeine iyashukumisa.
Ngakho-ke kungenzeka ikhulise imetabolism yakho. Kepha kungani ngithanda lesi sitatimende ngoba ikhofi elimnyama lisho ukuthi awekho ama-calories amaningi asuka kushukela, ubisi, izimbiza zobisi. Konke lokho.
Futhi, ikhofi elimnyama ngobuchwepheshe ligcina ijubane lakho lihamba. Ngakho-ke uma ungumthandi wokuzila ukudla ngezikhathi ezithile, usazothola izinzuzo eziningi ezifanayo ngokuvuselelwa okuncane ebhodini. 'Faka isibuko phambi kwetafula lakho lokudlela. 'Ucwaningo lukhombisa ukuthi uyazibukela wehlisa inani lokudla okudlayo.' .'-- Cha, uma ufuna ukulengisa isibuko phambi kwetafula lakho lokudlela ngenxa yomhlobiso, sicela uqhubeke ngokushesha.
Uma ukwenzela ukukwenza uzizonde ngenkathi udla, cha. (Ukukhuluma olunye ulimi) Sebenzisa amapuleti nezitsha ezincane ukwenza ukudla kwakho. Leli iqhinga elibonakalayo elikunikeza umuzwa ogcwele lapho ubona ipuleti elihlanzekile. 'Ngiyayithanda le thiphu.
Ngicabanga ukuthi kuyithiphu enhle engenabungozi. Ngempela enye inkinga enkulu ngemikhuba yokudla yeziguli zami ezikhuluphele noma ezikhuluphele kakhulu ukuthi zidla iziseva ezinkulu impela futhi aziqapheli nakancane. Ngakho-ke ukuba nepuleti elincane sekuvele kuyazisiza ukuthola usayizi wokuphilisa onempilo.
Uma uyibona futhi udla ipuleti lonke, kunomqondo ongokwengqondo wokuthi ukungenisa kanjani lokho, kuba nomthelela impela. 'Zila ukudla ngezikhathi ezithile,' noma futhi kunganciphisa ubukhulu bemisipha. Lokhu kuyimpikiswano.
Kwabanye, njengami, ukuzila ngezikhathi ezithile kusebenza kahle ngoba udla ewindini lesikhathi elithile, okusho ukuthi awudli amahora ayi-16 ngosuku futhi Ukudla kuphela iphethini yokudla yamahora ayisishiyagalombili esilinganiselwe kuzonciphisa inani lama-calories uyadla. Imvelo nje yokudla efasiteleni elincane. Abantu empeleni bangena ebudlelwaneni obuphazamisekile ngemikhuba yabo yokudla lapho benza lolu hlobo lokuzila.
Ngakho-ke akungenxa yawo wonke umuntu, kepha kuyindlela. Futhi empeleni siyibonile imiphumela emihle yezempilo ngaphandle kokuncipha. Lokhu kufaka phakathi izinguquko ze-hormonal, izinguquko ezinhle ze-hormonal, ukucaca okwengeziwe.
Kukhona nenzuzo yangempela ngokungadli amahora ayi-16 ngosuku. Lokhu kukunika inzuzo lapho ukwazi ukugxila, ukuzivocavoca umzimba, futhi mhlawumbe wenze neseshini encane yokucabanga. Yini Engathatha Ibanga Elide Ukuya Ku-C? Ngishilo ngoNoom phambilini nakulabo ababengazi, uNoom ungaphezulu kakhulu kohlelo lokwehlisa isisindo.
It empeleni ihlanganisa amandla ezobuchwepheshe kanye nozwela lwabaqeqeshi bangempela babantu isayensi ukukusiza ushintshe indlela oziphethe ngayo. Ebudlelwaneni obunempilo nokudla okugcina kuholele ekunciphiseni isisindo. Into enhle ngoNoomis isuselwa olwazini lwe-psychology kanye nokwelashwa kokuziphatha kwengqondo ukukusiza wakhe imikhuba enamathelayo ukuze ufinyelele isisindo esinempilo.
Ayikho imikhuba yokuzivocavoca eyinkimbinkimbi noma imikhawulo yokudla, futhi ngoba uNoom ugxila kwimikhuba yakho nokuziphatha kwakho Uma ngikhuluma kabi ngokudla ngokweqile, kungenxa yokuthi abantu abaningi bakwenza ngezindlela ezingenampilo lapho benciphisa isisindo baphinde bathathe le Ndoda eyodwa futhi. Futhi ukwehlisa isisindo eceleni, uNoom ukukunikeza ukuqonda okumangazayo kokuthi kungani wenza izinto ezithile ozenzayo. Ziyini izisusa zakho zokuziphatha okuthile? Khumbula, lolu hlobo lolwazi lubalulekile empilweni enempilo.
Ngine-tattoo ethi 'Zazi' emzimbeni wami futhi uNoom uzokusiza uzazi. “Faka esikhundleni se-protein evamile enama-kilojoule amaningi owafaka nge-'whyy protein powder '. Nginqikaza ukuncoma lokhu kubantu abaningi.
Angiyena umlandeli omkhulu wokuthola izidingo zami zamaprotheni kusuka kwizithako zokudla. Uma unesidlo esinamaprotheni amaningi kuvame ukuza namafutha athile; mhlawumbe ama-carbs ambalwa ngokuya ngomthombo wamaprotheni. Futhi lapho uthola i-whey protein powder, uhlukanisa amaprotheni ngempela futhi uthola lokho nje.
Nginomuzwa wokuthi ucebile ngomsoco Ungathola imithombo yamaprotheni afana ne-tuna, njenge-salmon. Futhi ngaphezu kwamaprotheni, uthola nenqwaba yamanye amaprotheni angenawo amasondo afana ne-omega-3 fatty acids. 'Hlafuna kancane. 'Ingqondo yakho ingathatha isikhathi ukukhombisa isisu sakho'. ukuthi usuthi, ngakho-ke ukubekezela ukuthi udla ngokushesha kangakanani kungavumela inkathi yakho yemvula ukuthi iphele ngaphambi kokudla ngokweqile.
Ngingashintsha leso seluleko kancane. Ngingathi ukuhlafuna ngokucophelela ngoba uma uhlafuna ngokunensa kungahle kungakhululeki kancane. Kepha uma ukhetha ngokucophelela, ungazinika nesikhathi sokukhombisa emzimbeni wakho ukuthi usuthi, uthola umsoco owudingayo.
Ngoba kumayelana nokudla uze ufike lapho usuthe khona, hhayi lapho uzizwa usuthe uze uzizonde. Masibhekane nakho, sonke besikhona. Kepha lokhu akuyona indawo ekahle lapho uzama ukugcina isisindo esinempilo. 'Spoil ukudla ongakufuni noma okudinga ukukudla.
Uma unezinsalela ezibiza igama lakho, thola indlela yokonakalisa ukudla, isibonelo ngokuthela ubisi phezu kwalo noma ngokufaka ithani likasawoti. Ini? Lokhu akugcini ngokuholela endleleni yokudla enezinkinga lapho ucekela phansi ukudla esikhundleni sokwakha ubuhlobo obunempilo nakho, kodwa futhi ulahla nokudla umuntu angakudla. Abantu baseMelika balambile, ikakhulukazi ngesikhathi se-COVID-19.
Le yinkinga yangempela, futhi kuyinkinga enkulu kakhulu emhlabeni jikelele. Angazi ukuthi lesi seluleko sivelaphi, kodwa izithupha ezimbili ezenzelwe mina. 'Phuza itiye eliluhlaza. 'Igcwele ama-antioxidants anamandla abizwa ngokuthi ama-catechins, okukholelwa ukuthi asebenza ngokubambisana ne-caffeine ukwenza ngcono ukushiswa kwamafutha.
Ngingomunye wabalandeli abakhulu betiye eluhlaza lapho. Kubalulekile ukwazi ukuthi iqukethe i-caffeine. Ngakho-ke akusona isiphuzo esikhulu sokuphuza ekupheleni kosuku.
Kepha ngesidlo sasemini, ibhulakufesi, itiye eliluhlaza okotshani kuyindlela enhle. Aqukethe amakhatheni kuphela kodwa nama-polyphenols. I-L-theanine, enhloboni yokususa isikhuthazi se-caffeine ukuze uthole umfutho owutholayo, kepha futhi ikunikeza nethonya lokuthoba engqondweni yakho.
Yebo, noma ngabe empeleni itiye eliluhlaza likhulisa ukwehla kwesisindo, ngeke kube nomphumela womlingo owubonayo lapha. Eqinisweni, ngibonile izinkampani eziningi zenza okuthile okunomthunzi onjengokuthi, 'Izithasiselo zethu ziqukethe ukukhishwa kwetiye eluhlaza,' futhi lokho kukusiza ukuthi ushise amanoni. 'Ungayi kude kangaka.' Ukuqeqeshwa isikhawu. 'Ukuqhuma okufishane kokuzivocavoca okunamandla' kulandelwe okude, okunomzimba Ukuzivocavoca. 'Lokhu ukuzivocavoca engikuthandayo, i-HIIT, i-HIIT, i-HIIT, i-HIIT, lokhu ukuqeqeshwa kwesikhawu esiphakeme kakhulu.
Wenza noma yini imizuzwana engama-30 noma umzuzu. Futhi-ke wenza ukukhanya, ukukhanya kokuqina okwenziwe umzuzu, imizuzu emithathu, imizuzu emihlanu. Okokuqala, kukhuthaza ukulahleka kwesisindo.
Okwesibili, kukhuthaza ukwakhiwa kwemisipha, kuthuthukisa ukwehluka kwesilinganiso senhliziyo. Uma uqala ukuzivocavoca ngokushesha okukhulu futhi usebenzisa amandla akho ngokugcwele, izinga lokushaya kwenhliziyo yakho kufanele likhuphuke ukwenza lokhu. Kepha uma wenza ukuzivocavoca okulula, ukushaya kwenhliziyo yakho kufanele kukwazi ukwehlisa umoya futhi, futhi lokhu kuzothuthukisa kancane kancane ikhono lenhliziyo yakho lokwehlisa umoya ngalesi sikhathi sokukhanya okukhulu.
Futhi lokho esikubonile empeleni ocwaningweni lwesayensi kuthuthukisa ukusinda kubantu abaye bahlaselwa yisifo senhliziyo lapho bebe nokuhluka okuhle kwesilinganiso senhliziyo. Kuyinzuzo yangempela yokusinda. 'Jwayela futhi wamukele umuzwa wokulamba.' Awungehlisi isisindo ngaphandle kokubekezelela indlala. 'Ngakho-ke kubalulekile ukuqaphela lowo muzwa futhi ukujwayelekile.' Lokho akulona iqiniso okwenziwe kahle impela.
Udla kuphela kuze kube seqophelweni lapho ungasalambi khona. Lapho uzizwa ugcwele kepha ungagcwele ngokweqile. Ngaleyo ndlela, awudli amakhalori.
Awunawo lawo ma-servings amakhulu kakhulu okudla okungenampilo, futhi akudingeki uhlale ulambe. 'Phakamisa izinsimbi esikhundleni sokwenza nje i-cardio.' Lokhu akugcini nje ngokukulahlekisela ngamafutha, kodwa futhi wakha imisipha ukuze uwuthathe Faka esikhundleni. 'Iseluleko esenziwe lula kodwa umqondo ohloniphekile jikelele.
Ngizochaza. Lapho ngincoma inqubo yokuzivocavoca ezigulini zami, angivamile ukuthi ngithi nje i-cardio noma ukuqeqeshwa nje kwamandla. Imvamisa kuyinhlanganisela yakho kokubili.
Isizathu salokhu ukuthi banezinzuzo ezihlukile futhi lezo zinzuzo zidweba isithombe esiphelele sempilo enhle noma efanelekile; kuningi ongakusebenzisa, isibonelo. Kuhle ngempela enhliziyweni yakho. Isiza ngokuhlukahluka kwesilinganiso senhliziyo, ikakhulukazi uma wenza ukuqeqeshwa kwesikhawu esiphakeme.
Kepha uma uphakamisa izinsimbi, awugcini ngokushisa amafutha futhi usebenzise ama-calories ngenkathi uzivocavoca umzimba. Uma uzivocavoca umzimba, wenza kanjalo lapho usululama. Kamuva ngalolo suku, ngosuku olulandelayo, ngoba kuthatha amandla ukwakha leyo misipha futhi uyakhe iqine noma iqine uma uphakamisa kanzima ngokwanele futhi ngokuqinile ngokwanele ukuvimbela ukwehla komzimba lapho umzimba wakho ume lapho kungekho okumele ukwenze lapho.
Ngenkathi udla, i-metabolism yakho iphoqeleka ukuthi ihlale imatasa. Lokhu kuhlelwe kahle isayensi yanamuhla yokuqapha ukudla kwakho kwe-caloric futhi ungadli ukudla okungenamsoco, ukudlisa, ukudla okulula kanjalo kungaba yindlela ongayenza. Kepha akuyona indlela ephoqelela empumelelweni.
Kunabantu abaningi abangadla kabili ngosuku kanye nezintathu zokudla ngosuku futhi benze umsebenzi njengalabo abadla ukudla okuncane usuku lonke. Lesi yisinqumo somuntu ngamunye esisuselwa kuzinhloso zakho, indlela ophila ngayo, nokuncamelayo. Lokhu akufanele kube inqubo ebuhlungu. 'Amanzi okuphuza kusasele imizuzu engu-30 ngaphambi kokudla kusiza umzimba wakho ukuthi ushise ama-calories ngokushesha, bese wehlisa isisindo.' “Ukwehlisa isisindo somzimba akulula njengokuphuza amanzi, kodwa amanzi ayisakhi esibaluleke kakhulu emzimbeni wakho, futhi kunezinzuzo eziningi zokuhlala unamanzi amaningi.
Amanzi okuphuza azokwelula umzimba wakho, ngakho-ke mancane amathuba okuthi uthole ukudla okukhulu impela. Okwesibili, kukhona inqubo ye-thermogenesis eyenziwe ngamanzi. Lokho kunobunye ubufakazi namaqiniso okuthi ngokuphuza amanzi angama-70 degree empeleni kufanele ushise izinga lokushisa komzimba wakho elijwayelekile futhi lokho kushisa amakhalori athile.
Akuyona into enkulu, kepha nakanjani kufanele ishiwo. Kuyasiza ukususa imfucuza emzimbeni wakho. Iyanciphisa igesi futhi yenza lonke uhlelo luqhubeke.
Futhi kukugcina unamanzi futhi kusebenza kahle ngesikhathi sokuzivocavoca umzimba. Uma unesikhathi esihle sokuzivocavoca, kungenzeka ukuthi ushise ama-calories amaningi. Qala ukulungiselela ukudla. 'Hlela konke ukudla kwakho kwesonto' bese uchitha amahora ambalwa ukupheka futhi ukugcine kuziqukathi ezingathengiseka ngaphambi kwesikhathi 'Ngakho-ke ungathola isidlo esilungisiwe esikhundleni soku-oda ukuthi sikususe' uma kufanele ukhathele ukupheka okuthile okusha. 'Ngiyasithanda leso seluleko.
Ngike ngazama esikhathini esedlule, kepha ngiyabona ukuthi ngipheka kabi. Ngakho-ke ngiyasebenza. Kepha isizathu esenza ngikuthokozele lokhu kungenxa yokuthi u-A uyakwazi ukulawula ukuthi hlobo luni lokudla okudlayo.
Yimaphi amafutha opheka ngawo? Lapho unokulawula lokhu, uzokwenza izinqumo ezingcono. Okwesibili, uma ukhathele futhi ufika ekhaya futhi ungenawo amandla okwenza okuthile, ungahle u-ode. Futhi lapho u-oda, uzothi, 'Manje njengoba ngiya-oda, ngifuna ukukujabulela.' Futhi uzothola okuthile okungekuhle.
Yebo yebo, hlela ukudla kwakho ngaphambi kwesikhathi. Uzokonga imali, udle okunempilo futhi mhlawumbe ufunde nekhono elisha lokuthi wenzeni. 'Ngenkathi ukuzivocavoca umzimba kungakusiza wehlise isisindo, ukudla kudla kakhulu kwesilinganiso sokuncipha kwesisindo.' Futhi kungenzeka ngokuphelele ukuthi ulahlekelwe.
Ngaso sonke isikhathi ngifuna ukuthi iziguli zami zivivinye umzimba, hhayi nje ngoba ngiyazi ukuthi zisebenzisa amandla amaningi ngakho-ke zinciphisa isisindo esithile. Kungenxa yokuthi iphilile kuzo zonke izici zokuphila. Izosiza okuthile ngokuncipha, imizwa yakho, ubuhlungu bakho.
Ukuzethemba kwakho, okungadlala indima ekukhathazekeni nasezimpawu zokucindezeleka. Kodwa-ke, uma unesifiso sokwehlisa isisindo sakho sibe sezingeni eliphilile, okulungele ukuphakama kwakho nendlela ophila ngayo, ukudla kuyinto ebaluleke kakhulu okufanele ugxile kuyo. Lokho kushiwo, lala, uzivocavoca, impilo yakho yengqondo.
Zonke lezi zinto zidinga ukucatshangelwa. Ukudla ikhalori nokudla ikhalori kungaba nengqondo ngokombono wesayensi. i Ngokombono osebenzayo, akukuhle impela, okungenani hhayi wonke umuntu.
Ngifuna ukwabelana ngolwazi lwami lwe-noom ukuze wazi ukuthi yini ongayilindela uma uchofoza ukuhlolwa kwe-inthanethi kwamahhala ku-noom.com noma isixhumanisi esingezansi ukwenza uhlelo ngokwezifiso ngokuya ngezinjongo zakho. Kimi, bekuthakazelisa ukulahla isisindo esincane futhi ngigqashule eminye yale mikhuba engemihle engayithuthukisa ngenkathi ngihlukanisiwe.
isivimbo selanga sivimba uvithamini d
Okunye kokuhlangenwe nakho kwami ​​okukhulu kunakho konke noNoom kube ukunqoba okuncane okungezona izinombolo. Futhi leyo yinto ebengihlala ngiyazi futhi ngiyincoma ezigulini zami, kepha kulula ukubanjwa empilweni yansuku zonke bese ukhohlwa ngezinzuzo ezengeziwe zokuqinisa ukuzethemba, amazinga aphezulu wamandla. Nalezi zinikela empilweni enempilo nejabulisayo.
Futhi angikwazi ukusho enye yezingxenye ezipholile kunazo zonke ukuba nesazi sokukhomba esizinikele. Umuntu wangempela ozokusiza uhlale emgqeni futhi akusekele lapho ubadinga. Ngilimaze umlenze wami ngesonto eledlule futhi ngidinga usizo kuchwepheshe wami wokukhomba ukuze ngijike.
Yilokho kanye abakwenzile. Esikhundleni sokukhathazeka ngokulimala kwami, bengigxile futhi ngijabule ngokufeza izinhloso zami ezintsha. Kuze kube manje, angigcinanga ngokuhlangabezana nezinhloso zami zesisindo, kepha ngizwe sengathi ngenze ukukhetha okunempilo empilweni yami yansuku zonke.
Maka. Futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuwina okukhulu. Futhi ngibheke phambili ukuqhubeka nalolu hambo.
Chofoza lapha ukuthola uhlu lwadlalwayo oluphelele lwezihloko zami ze-Real Nutrition. Noma uma ufuna ukuhleka kahle, hlola isiqephu sami se-meme sakamuva. Futhi, ngiyabonga kakhulu kuNoom ngokuxhasa le ndatshana.
Njengenjwayelo, hlala ujabulile futhi unempilo. Yisiphi isihloko osichofozayo?
Ingabe kulungile ukwenza imizuzu eyi-10 HIIT nsuku zonke?
Akufaneleyenza i-HIIT nsuku zonke. Iziphathimandla eziningi zezempilo zincoma ngokufanele ukuthi uhlose okungaba ngu-30imizuzuwokuzivocavoca i-cardio ngosuku ukugcina umzimba wakhouphilile.
Nginganciphisa isisindo sokuzivocavoca imizuzu engu-10 ngosuku?
IngabeIminithi eli-10 ngosukungempela ngokwanele ukukugcina uphilile futhi uphilile? Izindaba ezimnandi ukuthi yebo, kunjalo!Imizuzu eyi-10kaukuzivocavoca umzimbaukuusuku canikusize ukuukuncipha emsimbeni, kanye nokuba nokushoda kwekhalori futhi wenze umehluko omkhulu empilweni yakho futhiukufanelekaamazinga.Meyi 11, 2020
Ngabe kufanele ngenze isivivinyo seminithi eli-7 nsuku zonke?
Yebo, uJordan uthi, ikakhulukazi uma ungasebenzi kakhulu manje. 'Cabanga ukuhlala phansiImizuzu engu-7kuqhathaniswaImizuzu engu-7yokuzivocavoca umzimba. Akungabazeki ukuthi ukuvivinya umzimba kunenzuzo. ' Kepha uzothola imiphumela engcono uma uphinda ifayela le-7-umzuzuisifunda.Meyi 18, 2015
Ingabe ukuqeqeshwa kwemizuzu engu-7 kumahhala?
OkwangempelaImizuzu engu-7 Yokuzivocavocakuyintomahhala.UJan 13. 2021
Ingabe ukusebenza ngemizuzu engu-3 10 kuyasebenza?
Ukuthola okungenaniImizuzu eyi-10yomsebenzi oqhubekayo olinganiselayoezintathuizikhathi ngosuku zinganikeza izinzuzo ezifanayo zezempilo njenge-30imizuzuyokungamiukuzivocavoca umzimba.
Ingabe ukuzivocavoca imizuzu engu-15 kungcono kunokuthile?
VeleImizuzu engu-15Ukuzivocavoca ngosuku kungakhuphula iminyaka yokuphila yeminyaka emithathu futhi kwehlise ingozi yokufa ngo-14%, ucwaningo oluvela eTaiwan lukhombisa. Ochwepheshe beThe Lancet bathi leli inani elincane kakhulu lomsebenzi umuntu omdala angalwenza ukuze athole noma iyiphi inzuzo yezempilo.Aug 16 2011